Indlela yokwenza iziqhumane e "Maynkraft", nokuthi kungaba
Uma ukufezekisa into ezuzisayo "Maynkraft" livela sifiso ukugubha. Ngisho emdlalweni usuku evamile ngezinye izikhathi ufuna into egqamile futhi engavamile, ezingase bajabule futhi unike kwalibaleka. Othile ukwenza lokhu, mane nje repaint endlini yakho lowehlukile, umuntu uya ukuzingelwa izixuku ezingavamile futhi iyingozi - konke kuncike umdlali. Kodwa kukhona indlela ukuthi nakanjani isebenze ngazo zonke - ukhilikithi. Ekuphileni okungokoqobo, iyiphi iziqhumane ikhanga izigidi zabantu, ngoba umbono ngendlela emangalisayo enhle futhi emnandi. Futhi uma ukwazi ukwenza iziqhumane e "Maynkraft", ungakwazi ukupenda nsuku ngemibala egqamile.
Ukudala Isakhi esiyinhloko
Hlela iziqhumane kule game, ungasebenzisa rocket, kodwa lokho kumane nje ngesitsha, ngakho-ke ngokuyisisekelo uya ngakho. Uma ufuna ukwazi indlela yokwenza iziqhumane e "Maynkraft", bese kudingeka uqale banakekele sprocket. Kuyinto eyisisekelo iyiphi iziqhumane, kwaba wakhe ngokwezifiso indlela ukuze uthole iziqhumane, wena ngiphupha. Ngakho isinyathelo sokuqala - craft uphikisana uqobo. Kodwa kungaba khona ukuhluka. Iqiniso lokuthi ukudalwa izinkanyezi senzeka ngokuxuba powder nge udayi. Umsizi kuyasiza ingashintshiwe kuyilapho udayi zingase zihluke. Kuyinto kulesigaba umbala esemqoka ye salute esizayo. Kodwa lokhu kunganele ukuqonda ngokuphelele indlela yokwenza iziqhumane e "Maynkraft". Kufanele wenze ezinye izinyathelo.
Kodwa ingabe kuwukuphela kwesinyathelo nombala ofanayo - kumnandi? ezithakazelisayo Okuningi lapho kukhona salute eziningana. Futhi yilapha lapho kuza okwamanje ukuthi ichaza indlela yokwenza iziqhumane e "Maynkraft" umbukwane ngempela. Uma uthatha inkanyezi ngomumo-ezenziwe nombala ofanayo, bese acatshangelwe nomunye udayi, uthola umyela. Uma inkanyezi ngokwayo wenziwa okwesibhakabhaka, bese kuye, ngomumo, engeza obomvu, ke iziqhumane ngizoya kusukela blue obomvu. Ngakho ungakwazi ukwengeza eziningi udayi noshintsho a imibala ambalwa. Lokhu kuyikhono ewusizo kakhulu ukuthi kuyokusiza wenze iziqhumane kukhanga ngokwengeziwe. Nokho, ulwazi mayelana, isibonelo, indlela yokwenza ku "Maynkraft" iziqhumane Creeper elekhanda, kungase othakazelisayo kakhulu futhi ulwazi.
Umthelela phezu kwesimo
Ngokuzenzakalelayo, ama-lwenkanyezi e salute qhumisa ngesimo ibhola ezivamile - kungcono pretty ezikhexisayo. Kodwa kukhona kungenzeka zishintsheke ukumisa yayo. Kulesi sigaba, uyofunda okuningi mayelana nendlela ukwenza iziqhumane e "Maynkraft" 5. 1. 2, futhi izinguqulo kamuva. Iqiniso lokuthi ukwengeza inkanyezi isithako ekhethekile, uthola indlela entsha ukuqhuma ngesikhathi kwethulwa missile. Uma ungeza uphaphe, ukuqhuma kwenzeka azilingani, uma amagugu igolide, iphethini kuyoba ngesimo izinkanyezi. Ngosizo le Fireball , ungakwazi nomthelela usayizi ngalokhu kuqhuma, kodwa kuphela uma uyomenzela ibhola. Lezi modifiers ezithinta ubukhulu kanye ukuma ukuqhuma, akufanele kube udidekile nomunye, okungukuthi, ukusetshenziswa eyodwa kuphela ezivumelekile. It uhlala ukutshela mayelana lwewashi ezithakazelisayo kakhulu - ikhanda zesixuku. Uma womshini sprockets olisebenzisa iresiphi noma iyiphi inhloko, iziqhumane yakho izothatha ikhanda ifomu Creeper, okuyinto umbukwane kakhulu futhi engavamile. Njengoba ubona, kukhona ezinye izindlela ezithakazelisayo "Maynkraft" womshini ezihlukahlukene iziqhumane nge ukuqhuma ahlukahlukene. Indlela yokwenza iziqhumane lanetibonwa eyengeziwe - lena zokugcina ndaba ebalulekile ngokuphathelene ukubukeka.
Awukwazi kuphela ukushintsha ukuma ngalokhu kuqhuma, kodwa futhi wengeza ezinye visual effects ezokwenza iziqhumane zakho umxhwele nakakhulu (ngezindinganiso "Maynkraft" emhlabeni). Indlela yokwenza ezimibalabala fireworks isibonisi, usuwazi, ungase ngisho baye bafunda ukwenza kube ziyakhazimula futhi ushintshe ijamo. Kodwa uma ungeza e asterisk svetopyl iresiphi, ngesikhathi ukuqhuma ukhilikithi rocket uzowa tincenye encane elibukeka okuthakazelisayo. Nokho, uma ungenawo uzisole futhi sizochitha ku idayimane yakho iziqhumane, ekuqhumeni esibhakabhakeni uzonyamalala hhayi ngokuphelele - ngeke ushiye trace okubukwayo ambalwa ukukhunjuzwa umbukiso Amazing, owenziwa ngezandla.
Konke lokhu kwaziswa asebenzelana lwenkanyezi, okungukuthi, ukugcwalisa rocket. A rocket uqobo, namanje angazi kanjani ukukhiqiza, ngakho ukuntuleka esiphuthumayo ukukulungisa. I izingxenye ezintathu ezisemqoka ukuthi udinga ukwakha rocket - lokhu neziqhumane, emaphepha kanye izinkanyezi ngokwabo, wena nakraftili ngaphambili. Iphepha ukwakha iziqhumane kudingeka ikhophi eyodwa kuphela, futhi ibekwe kuseli eyinhloko ebhentshini. Kodwa inani powder ziyahlukahluka. Ungabeka eyodwa kuphela block neziqhumane ngaphansi iphepha, futhi ngeke bagcina kuqhuma eliphakeme esikhathi esifushane. Kodwa esikhundleni block olulodwa, ungasebenzisa ezimbili noma ezintathu, futhi isikhathi ngasinye ukuphakama kanye nesikhathi kuqhuma kuyokhula. Ezinye izindaba zika-isikhala singavalwa nge asterisk. Nokuningi wabo, kulapho ngeke ukuqhuma. Futhi isikhathi eside iziqhumane. Missile lingalayishwa nge izinkanyezi emihlanu, futhi ungakwazi ulithumele e kwendiza ngaphandle kwabo ngaso sonke, kodwa ke ukuqhuma, ngeshwa, ngeke.
Wena acatshangelwe rocket futhi usigcwalisa inkanyezi kwesokudla - ukuthi ukusebenzisa isikhathi. Akukho lutho nzima - thatha into esandleni sakho bese ucindezela inkinobho yegundane kwesokudla, rocket fly emoyeni, sininika ubuhle engalibaleki salute yayo.
Indlela kukhishwe insimbi "Maynkraft" futhi okudingeka uyenze?
Yokukhokha engamancozuncozu "Tele2": indlela elula ukuhlala axhunyiwe